Andro: 20 mey 2020
Ny minisitra Koca, tao anatin'ny fanambarana nataony taorian'ny fihaonan'ny Komity siantifika, dia nanohina ny toeran'ireo olona 65 taona mahery. "Ny olom-pirenentsika mihoatra ny 65 taona dia ho afaka hamonjy ny fireneny mandritra ny 1 volana miaraka amin'ny fahazoan-dàlana." Mampiasa ny fitenenana Koca, [More ...]
Ny razamben'ny saka dia zavamananaina any an-efitra. Noho izany, ny fahafahan'izy ireo mifantoka amin'ny urine dia novolavolaina mba hanafoanana ny fahaverezan'ny rano be loatra ary ahafahan'ny vatana miaro ny rano. Na izany aza, io fahaiza-manao io dia matetika ampiasaina amin'ny saka. [More ...]
Nandritra ny fivoriana "Council Council" nokarakarain'ny Vondrom-paritry ny indostrian'ny indostrian'ny Eskişehir, ny olana nisedra ny indostrianaly nandritra ny fizotran'ny areti-mifindra amin'ny coronavirus (Covid-19) sy ny vokatry ny viriosy amin'ny toe-karena. Ny sehatry ny zava-indrijiny nataon'i Eskişehir Organisation Zone Zone Directorate [More ...]
Samsun Metropolitan Municipality dia nanao fandaharana vaovao tao amin'ny AFAD Junction mba hanomezana ny zotra fitaterana am-pilaminana sy fahazoana aina sy mahafinaritra. Samsun Metropolitan Munisipaly, izay mitohy ny serivisy hanakorontanana ny orinasam-pitaterana, Recep [More ...]
Izmir Metropolitan Munisipaly dia manafaingana ny fanavaozana ny lalana sy ny fikojakojana mandritra ny andro corona. Tamin'ity fizotran-javatra ity dia nampiasa asfalt 418 200 taonina ny ekipa metropolitan ary fitaovam-panakelahana parquet ho an'ny tanàna ao amin'ny tanàna. [More ...]
Izmir Metropolitan Munisipaly dia nanapa-kevitra ny hanome fanampiana tampoka ho an'ny masoivoho ao amin'ny distrika taorian'ny fampiasana ny saron-tava nataon'ny Birao manokana İzmir General. Nizara mason-doha 2,5 tapitrisa ho an'ny olom-pirenena hatreto [More ...]
Torkia, tetik'asa midadasika amin'ny ady amin'ny fahaverezan'ny sakafo sy ny fako no ampiharina. Ny fambolena, miaraka amin'ny fanohanan'ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO), "Tehirizo ny sakafo, arovy ny latabatrao" [More ...]
Ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank dia nilaza fa nanomboka ny fanarenana ny sehatra tena izy ary tonga ny famantarana tsara ary nilaza hoe: [More ...]
Ny minisitry ny vola sy ny vola Berat Albayrak dia nizara hafatra tao amin'ny kaontiny Twitter noho ny fahatsiarovana ny 19 Mey tamin'ny Atatürk, Tanora sy Fanatanjahantena. Minisitry ny Albayrak, ny fivoahana Mustafa Kemal Atatürk mankany Samsun ary mariky ny tolona nasionaly [More ...]
PttAVM fanokafana fivarotana fivarotana / EPttAVM dia manontany tena ihany ianao amin'ny fivarotana an'ity torolàlana e-varotra ity. Ireo orinasa mivarotra EPttAVM, dia manana fivarotana ara-batana na te hivarotra an-tserasera [More ...]
Faly fahadimy, UIC dia nikarakara fifaninanana sary mba hampiasaina amin'ny kalandrie 2021. Sarin-tany avy any amin'ny firenen'i Pasifika dia afaka handray anjara amin'ity fifaninanana ity. Saripika 20 no hofidina sy hatao pirinty ao amin'ny alimanaka UIC 2021 ary ho avy io tetiandro io [More ...]
Ny Fitsarana ambaratonga faha-10 any Istanbul, tao amin'ny fitoriana napetrak'i Halk Evler manoloana ny fananganana ny tetikasa Kanal Istanbul, miaraka amin'ny fangatahana fanafoanana ny fanadihadiana momba ny tontolo iainana (EIA), navoakan'ny Minisiteran'ny tontolo iainana sy ny tanàn-dehibe. [More ...]
Ny tsipika izay nanamboarana ny Emay Engineering sy Consulting, izay notohanan'ny Kaominin'i Istanbul Metropolitan, dia manara-maso ny fanaraha-maso ny trano sy ny asa fanamboarana an'i Aga Energy; Manodidina ny 13,5 km ny halavany ary misy fiantsonana 12. Feno ny tsipikao [More ...]
Ekrem İmamoğlu, Ben'ny tanànan'i Istanbul Metropolitan Munz (İBB), dia nandray anjara tamin'ny lanonana mangotraka ny lalam-be nokarakaraina ho an'ny Metro Ataköy-İkitelli, izay hiaraka amin'i Marmaray, tsipika metro 4 samihafa izay miasa ao an-tanàna. Indostria İkitelli [More ...]
Mitohy ny fangatahana fampiasa ho an'ny mpamorona rindrambaiko 1 tapitrisa. Ireo izay te hanatsara ny tenany amin'ny sehatry ny rindrambaiko eo amin'ny sehatry ny sehatry ny daholobe sy ny sehatra tsy miankina dia afaka mihatra amin'ny '1 tapitrisa mpamorona rindrambaiko' amin'ny Internet. Fiofanana 1 tapitrisa no omena amin'ny alàlan'ny Akademia BTK [More ...]
Iza no İlber Ortaylı?
Tamin'ny 21 Mey 1947, dia teraka tao amin'ny fianakaviana iray tany Bregenz, Aotrisy ny Crimean Tatar. Nifindra tany Torkia niaraka tamin'ny fianakaviany izy tamin'ny roa taona. Nahavita ny fianarany ambaratonga voalohany sy faharoa ao amin'ny Istanbul Austrian High School. [More ...]
Fifandraisana amin'i Eskişehir mankany amin'ny seranana haingana
Ny filoham-pirenena Eskişehir OSB Nadir Küpeli dia nilaza fa miandry ny fepetra tokony horaisin'ny TCDD amin'ny fananganana ny lalan'ny lalamby 7 km eo anelanelan'ny Hasanbey Logistics Center sy OSB izy ireo. Küpeli dia tena zava-dehibe ho an'ny indostria Eskişehir [More ...]
Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi, Street Cevahir, hikatona ny fitohanan'ny fiara ao anatin'ny sehatry ny fanamboarana làlan'i Darıca Gebze Metro. ROTSIM-PITONDRANA IZAY AZONY MBOLA TATITRA Tale Jeneralin'ny Fampiasam-bolan'ny fotodrafitrasa Darıca - Gebze [More ...]
Ao Izmir, ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Birao Jeneraly momba ny fahadiovana dia mila mampiasa saron-tava ao amin'ireo faritany 30 sy manerana ny tanàna. Tao anatin'ilay fanambarana nataon'ny Governemanta Izmir, "Ny Birao Misahana ny tanànan'ny tanànantsika, ny lalàna laharana 1593 amin'ny" Lalànan'ny fahadiovana ankapobeny. [More ...]
Ny tohodrano ilısu hanome 2,8 Lira fandraisana anjara amin'ny toekarena
Ny Turbine 1 an'ny tanimbary tohodrano Ilısu dia niditra ny fotoam-pivavahana niaraka tamina lanonana iray natrehan'ny Filoha Recep Tayyip Erdogan tamin'ny fihaonambe video. Minisitry ny Fambolena sy ny Ala Minisitry ny angovo sy ny harena voajanahary miaraka amin'i Bekir Pakdemirli [More ...]
LGS May faha-2 Mey XNUMX
Boky Fanontaniana Takelaka faha-2 an'ny LGS Mey andiany faharoa; Ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena Ziya Selçuk dia nilaza tamin'ny fanambarana fa ho an'ireo mpianatra manomana ny Fanadinana Fidirana amin'ny Sekoly ambaratonga faharoa, bokikely fanontaniana faharoa an'ny Mey [More ...]
Nofinofy 70 taona tany Torkia niaraka tamin'ny tohatry ny tohodrano Ilisu
Minisitry ny Fambolena sy ny Ala Bekir Pakdemirli, ny famokarana herinaratra lehibe indrindra any Tiorkia dia iray amin'ny tetik'asan'ny tohotra Ilisu napetraka ao anaty fanompoana ho voalohany amin'ireo turbine enina namboarina ka nilazana izany tamin'ny lanonana: "Fantatry ny rano ny olo-tanintsika [More ...]
Fandaharan'asa fanohanana ny serivisy ao amin'ny Turquality Support Program Vita
Ny minisitry ny varotra Ruhsar Pekcan dia nanambara fa ny asa natao mba hanohanana ireo marika ao amin'ny "Turquality Support Programme" ho an'ny sehatry ny serivisy misy rafitra mifototra amin'ny "target market", hoy, "ny marika amin'ny sehatry ny serivisy dia. [More ...]